Cinoda Co 2 Laser tube Agwa
Kwụsie ike: The orùrù tube ka nke dị iko frit si Germany, na àgwà nke dum iko tube bụ controllable.
Power: US hollyland ngụkọta enyo na mmepụta enyo na-eji. The kasị elu ike bụ 190 watts, na mmepụta ike njupụta dị elu.
Ogologo ndụ: The orùrù tube ntekwasa na mkpali, jikọtara na electrode si pụrụ iche na usoro, na-eme ka ihapu ọzọ mụ na ọrụ ndụ dị ruo 10,000 awa.
Abù: Anụ oghere Ọdịdị, lekwasị, anụ, ezi àgwà, edo ntụpọ ụkpụrụ na elu arụmọrụ.
Usoro: The ngwaahịa ịgbado ọkụ akara kpamkpam akara na seramiiki mmiri jaket, kpamkpam-egbochi ihe ikuku, n'ụzọ dị irè na-egbochi elu-mgbali sparking.
The laser tube mirror mma na mmiri-mma seramiiki mmiri jaket, na mmepụta mirror na-ekwekọghị na ọla kọpa mmiri jaket nke mmiri jụrụ usoro, nke dị irè na-ebelata oghere okpomọkụ ma na ukwuu prolongs ndị ọrụ ndụ nke laser tube.
Electrode elu, pụrụ iche plating! --The electrode elu ọgwụgwọ adopts pụrụ iche metal plating kpamkpam kpochapụ akpa sputtering na oghere mmetọ, n'ụzọ dị irè inyịme ọrụ ndụ nke laser tube. N'ihu ma n'azụ oghere obi jụrụ cover, pụrụ iche craft! - Okpomọkụ-dissipating cover n'elu ọxịdashọn usoro, elu-arụmọrụ mkpuchi arụmọrụ, mbenata sparking agbapụta n'ahụ.
model Ogologo (mm) Dia (mm) Gosiri Power (w) Max ike (W) Ugbu (MA) mkpali
B20 1250 ± 20 Φ60 ± 2 80 95 28 Ee
B21 1250 ± 20 Φ80 ± 2 80 95 28 Ee
B40 1450 ± 20 Φ60 ± 2 100 120 30 Ee
B41 1450 ± 20 Φ80 ± 2 100 120 30 Ee
B60 1650 ± 20 Φ60 ± 2 130 150 30 Ee
B61 1650 ± 20 Φ60 ± 2 130 150 30 Ee
Ntuziaka maka ojiji nke CO2 laser
M .arụ ọrụ ọnọdụ
Mmiri jụrụ: eji ọcha mmiri, mmiri okpomọkụ: 10 ℃ -40 ℃.
The na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi: okpomọkụ 2-40 ℃; iru mmiri 10-60%.
Arụ ọrụ ugbu a: Oke-arụ ọrụ ugbu a bụ 32mA. The na-agba ọsọ ugbu a ga-nọ na n'okpuru 30mA. Tube ndụ nwere ike iru 10,000 awa ma ọ bụrụ na nke ugbu a na-nọ n'okpuru 28mA. The ammeter ga-ejikọrịrị ọjọọ electrode nke laser tube.When ọ na-arụ ọrụ n'okpuru n'elu-elu ugbu a n'ihi na ogologo oge, na-ezighị ezi osisi ga-acha odo odo na ndụ ga-shortened ngwa ngwa.
Iji chebe ájá si aga n'ime mkpuchi n'ọbọ, biko kechie ya plastic film.
II . arụ ọrụ Performance
Adịghị ọcha na mputa elu nke mmepụta nwaanyị di ya nwụrụ mirror na ngwaọrụ ndị dị otú ahụ dị ka tampon; ma ọ bụghị na mmepụta ike ga-kpọrọ emetụta. The followings bụ ẹkedọhọde ụzọ ọcha mmetọ na mputa elu nke window mirror:
1) Mgbe mirror na-emetọ, echela na laser.
2) Fụọnụ ndị mirror n'elu saidwees na ntụ ikuku mmiri.
3) Ịgba dị ọcha mmanya na-mirror n'elu na sprayer.
4) Tụgharịa na laser mgbe mmanya ego n'anya n'ụzọ zuru ezu volatilized.
5) Ọ bụrụ na ụzọ n'elu anaghị arụ ọrụ n'ụzọ dị irè, ọ dị mkpa ịjụ maka ọkachamara iji tampon na mmanya na-ehicha mirror n'elu si n'etiti ọnu. The ngwọta kasị mma bụ iji gbochie window si na-emetọ.
Ntị: a machibidoro iwu na-ehicha mirror na acetone.
The ịghasa ke n'ihu na azụ na nsọtụ nke laser tube na-adịghị ekwe ka-akpali, ma ọ bụghị si ike ga-jụrụ, na ọbụna tube ga-hapụrụ.
Etinye acryl 300mm anya n'ebe mmepụta mirror, mgbe anwale laser ntụpọ.
The laser doo-apụghị ịhụ anya ìhè. Biko na-eyi na-echebe iko mgbe debugging na laser. The mma osisi dị elu voltaji. Ntị ka nche akara.
V. Wụpụ obi jụrụ ọmụmụ na ihe omume nke nchekwa na njem, na-ekpuchi mmepụta ọnụ na a ájá na-àmà plastic akpa. The nchekwa gburugburu ebe obibi bụ 2-40 ℃, na rịọrọ iru mmiri bụ 10-60%. Abịa laser dị ka na mbụ way.Important ndetu: ọ rịọrọ ciment na ogbo ọnụ na laser tube iji gbochie tube ekwesị eji n'oge njem. The ogbo ke n'akụkụ nke mmepụta mirror ga-70 mm n'ofè ya, na ogbo ke n'akụkụ nke na-atụgharị uche mirror ga-50 mm wider.
Osote: Laser machine mirror
20w Fiber Laser osise Machine
3d Laser Crystal osise Machine
3d Laser osise Machine
3d Laser Glass osise Machine
40w 50w Laser osise Machine
6040 Laser osise Machine
Auto Ịnụrụ Laser Machine
Achara Crafts Laser osise Machine
Best ere Machine
Cheap N'onwe CNC Laser cutter
Chinese Machine na Nkedo ndina Cut sliver
Aha Tag osise Machine
Portable Laser osise Machine
Portable Metal Laser osise Machine
Rubber Stamp Laser osise Machine
Igwe anaghị agba nchara Metal Laser Cut
Stamp Ime Machine
Stone osise Machine
Okuteili osise Machine
Eriri Port-akanye Machine
Wood Laser osise Machine
Wood Pen Laser osise Machine
Olee otú ịhọrọ CO2 laser tube
Ihe: ihu ọma CO2 laser tube nwere iko tube (gụnyere orùrù tube), mirror, mmiri-c ...
Na ụdị na iche nke laser anya m
Laser n'ilekwasị mirror.There bụ abụọ iche iche nke anụ ụlọ na ndị dị n'ilekwasị enyo. The tra ...